3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2020 admin ရဲ့ 0
OSGEAR Desktop ကိုကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု – DW600BT 802.11a/b/g/n 150Mbps ,802.11ac 433Mbps Enhanced 600Mbps Wireless data transmission Rate,ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်မြန်နှုန်း. ဘလူးတုသ် 4.0 enables your non-bluetooth PC... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
OSGEAR Desktop ကိုကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု – DW1200BT 802.11a/b/g/n 300Mbps ,802.11ac 867Mbps Enhanced 1200Mbps Wireless data transmission Rate,ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်မြန်နှုန်း. ဘလူးတုသ် 4.0 enables your non-bluetooth... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Windows XP ကိုအဘို့အ OSGEAR DW2030BT Desktop ကို PCIe ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုကတ် Adapter ကိုယာဉ်မောင်း Software များ78 10
ဇန္နဝါရီလ 21, 2020 admin ရဲ့ 0
OSGEAR Desktop ကိုကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု – DW2030BT 802.11a/b/g/n 300Mbps ,802.11ac Enhanced 2030Mbps ကြိုးမဲ့ဒေတာထုတ်လွှင့်နှုန်း 1733Mbps,ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်မြန်နှုန်း. ဘလူးတုသ် 5.0 enables your non-bluetooth... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Intel ကဘလူးတုသ် BT ကြိုးမဲ့စက်ကို Windows မှာယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ်
ဇန္နဝါရီလ 17, 2020 admin ရဲ့ 0
Intel® Wireless Bluetooth® is recommended for end users, Bluetooth®နည်းပညာနှင့်အတူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်. Apple ကမော်ဒယ် : Intel BlueTooth Series How to install >>> Download the file to a... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဇူလိုင်လ 19, 2019 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး 0
ကြိုးမဲ့ကဒ်ကိုကြိုးမဲ့ local area network ၏ကြိုးမဲ့လွှမ်းခြုံအောက်မှာကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်မှတဆင့်အင်တာနက်ကို surfing အတှကျအသုံးပွုကြိုးမဲ့ terminal ကိုကိရိယာ. သောကွောငျ့ဖွစျသညျ,awireless card isadevice... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Windows ကိုအတွက်ကြိုးမဲ့ Adapter ကို Install လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြဘူးမည်သို့
ဇွန်လ 17, 2019 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး 0
ငါသည်သင်တို့ကိုအလုပ်ရပ်တန့်ဖို့ကွန်ယက် adapter ယာဉ်မောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမေးခွန်းအချို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ထင်. ဤအခြေလှမ်းများပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကြိုးမဲ့ adapter devices များသို့မဟုတ်ခေတ်မမီတော့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ် Follow. Make sure that you have installed the Wireless... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Windows ကိုအတွက် Bluetooth ကိုဝိုင်ဖိုင် Adapter ကို install လုပ်နည်း
laptops အမြဲဘလူးတုသ်-အဆင်သင့်ထံသို့လာကြပြီမဟုတ်. Computers without built-in Bluetooth capabilities interact with Bluetooth wireless devices with the help ofasmall receiver that plugs intoaUSB port on the... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Samsung က Technology_Internet HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HD Graphics မိုဘိုင်းဖုန်း ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE Software များ ဥပဒေရေးရာအနက် processor ​​ကို စီပီယူ Intel က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Nokia က နည်းပညာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ 64-နည်းနည်းက Windows ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် device ကိုမော်ဒယ်
HD Graphics device ကိုမော်ဒယ် 64-နည်းနည်းက Windows စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Software များ Technology_Internet နည်းပညာ Intel က Server ကို စမတ်ဖုန်းများ HTC က Samsung ရဲ့ Galaxy မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က OS ကို-STORE Qualcomm မှ Samsung က Sony Ericsson က Nokia က ဥပဒေရေးရာအနက် ပရိုဆက်ဆာ စီပီယူ processor ​​ကို ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်
မူပိုင်ခွင့် © 2020 | မူရင်းရင်းမြစ်နည်းပညာ Co. ,, Ltd မှ